Global Voices teny Malagasy » Asia Atsimo-Atsinanana: Fifanolanan-kevitra sy voina teo amin’ny taona 2008. · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 14 Janoary 2009 15:53 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Koloina RAMASINANDRO
Sokajy: Filipina, Kambodza, Korea Atsimo, Malezia, Myanmar (Birmania), Vietnam, Ady & Fifandirana, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fifindràmonina, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Media sy Fanoratan-gazety, Politika, Sakafo, Sarimihetsika, Sendikà, Teknolojia, Toekarena sy Fandraharahàna, Tontolo_iainana, Tsidika, Vehivavy sy Miralenta, Voina, Vonjy Voina, Zavakanto & Kolontsaina, Zon'olombelona
Tamin’ny fampisehoana farany teo (Southeast Asia: Newsmakers of 2008 )” no nanoratako ny momba ireo zava-nitranga manandanja lehibe indrindra izay niseho tao Asia atsimo-atsinanana. Amin’ity lahatsoratra ity kosa no hanasongadianako tantara hafa nahatonga fifandirana. Tanjona hafa ny hanangonana sy hanasokajiana ny lahatsora-mpifandraisana mipetraka eo an-kavanan’ny Global Voices, izay mikasika ny faritra
Andao ary isika hiresaka momba ireo lohateny nifandirana: Fitaovam-pananahana . Tafiditra tao anatin’ny korotana ara-pitondra-tena ny mpanao politika Malezianina: mpanao politika iray nanao firaisana tao an-trano fandraisam-bahiny  no voaray tao anaty horonan-tsary; ary ministry ny cabinetra teo aloha no voapanga nanolana vehivavy iray .
Nanoratra momba ny olana amin’ny fanampiasana ny fivaviana sy ny vehivavy entina hampisongadinana ny dokam-barotra  eo amin’ny Televizionina ny mpanoratra Tharum an’ny GV avy ao Cambodia. Nangataka ny fialan-tsiny avy amin'ny BBC  ny mpanao lalana Filipianina iray mikasika ny fandaharana tora-kehy(fampihomehezana) izay nampiseho vehivavy mpiasa an-trano filipianina “ho toy ny fitaovana fampimehezana ara-pitondratena.” Hita ihany koa tao Filipina fa tratra nivanitika tao an-tranom-padidiana ireo dokotera nandritra ny fotoana nanesorana ilay tavoahangin-dranomanitra tafiditra tao anatin’ny vodin'ilay marary  (fitombenana).
Nisy ihany koa ny olana ara-panambadiana. Namaritra tsikera momba ny filazana ny fihenam-bidim-bodiondry (vidin’ny vehivay ho vadiana)ny lahatsoratra nivoaka tao Singaporo. Najanon’I Cambodia ny fanamboarana ny taratasim-pisoratam-panambadian'ireo olom-pireneny amin'ny vahiny  mba hampihenana ny fanodikodinan’olona mety hitranga
Nanome lalana ny mpanolotsaim-pirenenana Fatwa an’I Malaysia izay milaza fa ny endrika ivelan'ny taranja yoga dia ekena fa ny singa ara-panahy entiny kosa no rarana. Nanao fiantsina fihetsiketsehana ao indonezia momba ny “hafatra entina manohitra ny silamo .” ny horonantsarin’ny Geert Wilders, Fitna
Mikasika ny fampandrosoana ny renivohitra dia mihevitra ny mpitoraka blaogy fa betsaka loatra ny toera-pilokana  (casino) ao an-drenivohitry Cambodia. Mibosesika ny mpivarotra an-dalambe mamboka eny amin’ny lalam-ben’I Hanoi. Miresaka ny fanoheran’ireo tompon-trano Singaporo ny mba hananganan’izy ireo trano fatorian'ny mpiasa vahiny ny mpanoratra GV Angshah.
Nanoratra momba ny korontana vokatr’ireo boky fanomezana very tao amin’ny faritanin’ny Filipina I Karlo, mpanoratr’I GV. Milaza ankarihary ny lalana vaovao sy ny hetra-tsigaran’I Singaporo ny resaka sasany tao anatin’ny Blogosphere. Nisy fifanoherana hafa ihany koa ny momba ireo tolo-kevitra mety ahazahoan-dalana ara-panjakana izay mahakasika ny fivarotana taova eo amin’ny firenena.
Niaina tao anaty tahotra I Singaporo rehefa vakin'ny mpampihoroho iray ny fonja avo lenta. Nahatsiaro ny taloha I Indonezia rehefa nananteraka ny famonoana ireo mpandatsaka baomban'ny Bali. Nandritra io fotoan io izay tamin’ity taona ity no nitondrana tatitra tao Myanmar ireo baomba niparitaka
Faharavan'ny sambo mpitatitra no voalaza fa nisy tao Filipina. Mihoatra ny 700 ny olona maty rehefa niondrana an-dranomasina ny sambo iray tao Filipina afovoany tamin’ny volana Jona farany teo. Mpifindra monina Myanmar maro dia maro no novonoina tao anaty fiara rehefa niditra antsokosoko tao Thailand atsimo izy ireo ny volana Aprily teo. Mponina mihoatra ny 3000 no tsy nanan-kialofana noho hain-trano tao Yangon sy tao Mandalay ny volana Febroary lasa teo.
lelafo tao amin’ny tsena YadanarPon an’ny Mandalay tao Myanmar. Sary avy tamin’ny blaogin'i Aung Chan Lin.
Niresaka ny toe-javatra ahatahorana (fianianana) eo amin’ny foko Penan ny mpanoratra mahain’I GV Daniel. Nofinganiny tsy hitohy ihany koa ny finoanonam-poana mikasika ny ala mikitrok'i Malaysia. Nanoratra koa izy momba ny Pontianak mampatahotra.
Lasa malaza eran’izao tontolo izao ny trano fidiovan'ny pelaka (sarim-bavy tena izy) Thailand. Niatrika ny rotsa-panala voalohany teo amin’ny tantara ihany koa I Thailand. Tanteraka antsakany sy andavany ny Bangkok Freeze sy Singapore Freeze
Miditra ao anatin’ny sehatra politika ny maha-izy azy ny ranty ao Indonezia. Noho ny fahalafosan’ny menaka dia lasa malaza indray ny menaka buffaloes ao amin’ny sahan’ny Laos sy Thailand.
Misy programan’asa manampy amin'ny fampianarana ny ankizy amoron-dalan'i Laos ho tonga mpahandro sakafo ao Vietnam . Araka ny fantatra, dia niditra an-dalana ao amin’ny vohitry Vietnam ny “mpandroba, feather-boa bicycle”
video ny Singapore freeze
Ady eo amin’ny Gazety sy ny governemanta
Voatatitra teny amin’ny faritra ireo toe-javatra maro mikasika ny fandikana ny fahafahan’ny mpanao Gazety. Voalazan’ I Caroline mpanoratry GV ny mikasika ny fisamborana ireo mpanao gazety roa tao Vietnam , ny helon’izy ireo tamin’izany dia ny fampisehoana ireo risoriso misy eo amin’ny masoivohon’ny governemanta. Ohatra iray hafa: nofohanan’ny fitondra-panjakana ny tatitra  voatokan’ny mpahay toe-karena.
Vaovao etsy sy eroa:nofihinina tao Cambodia ny taratasin’ny The Burma Daily. Tsy mbola mijanona ny fampitahorana ireo mpanao Gazety ao Cambodia. Voahosoka i Irrawaddy, tranok’alan’ny gazety lehibe sady mahaleo tena.
Misedra fandoavan-ketra hosoka ny mpihetsika toraka blaogy Vietnamianina. Nosamborina ny mpitoraka Singaporo mpanohitra. betsaka ny tranok'ala notapahan’I Indonezia.
Lasa mpanao politika ny mpitoraka blaogy teratany Malaysian ; lasa mpanao blaogy koa ny mpanao politika Malaysian . Efa nomena fampitandremana ny mety ho fikasana hamorona rotaka monohitra ny politika maloton’ny Malaysia ny mpitoraka blaogy. Niteny ny govenemanta fa tiany ny hinamanana amin'ny mpitoraka blaogy  noho ny herin’ny toraka blaogy misy.
Nanohana ny andro fankalazana ny hetsika blaogy 2008 hiadiana amin’ny fahantrana ny mpitoraka blaogy Filipianina. Nitory teny tao amin'ny YouTube ny eveka Katolika tao Filipina . Nanangana blaogy ny vondron’ny mpifindra monina filipianiana mba hanerena ny govenemanta hanadihady ny antony nahafaty ny mpiasa Filipianina iray . Miraika amin’ny fandefasana hafatra anapitrisa mankany amin’ny Aung San Suu Kyi ao Myanmar ny programan’asan-gazety mpandray anjara The Twitter Suu , “mba ampahafantarana azy fa manana fanohanana maneran’izao tontolo izao izy”. Nitoraka blaogy ny tsy fankasitrahana manohitra ny orinasa  mpanjifa Malaysianina ny be antitra teratany iray.
Ny fitorahana blaogy ao Vietnam dia fantatra fa fitaovana matanjaka ahafahana milaza hevitra . Mpitoraka blaogy Cambodianina no nankasitrahana ho mpahay raha eo amin'ny vaovaom-pirenena . Tao Myanmar, nisy mpanao gazety zokiolona nitsikera ny fihetsik'ireo mpitoraka blaogy maro. Mpitoraka blaogy Australian iray no lasa nalaza/nitodra ady hevitra tao Filipina rehefa nampiseho ireo hetsika mahamoafadin’ilay naman y, mpanan-karena tao Manila.
Voninahitra no omena ireto mpikaraka ny fotoana ireto: Sabah Bloggers Gathering 2008 , Mindanao Bloggers Summit , Twitter Saigon, Philippine Blog Awards, Pesta Blogger, BarCamp Malaysia , BarCamp Cambodia , Wordcamp Philippines .
Ho an’ireo mpanoratra rehetra, ekipan’ny Southeast Asia ny Global Voices, Arabaina ny tsirairay tratra ny taona vaovao!
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/01/14/1496/
 nanao firaisana tao an-trano fandraisam-bahiny: https://globalvoicesonline.org/2008/01/02/malaysia-politician-and-sex-tape/
 voapanga nanolana vehivavy iray: https://globalvoicesonline.org/2008/04/24/malaysia-woman-molested-by-an-ex-cabinet-minister/
 anampiasana ny fivaviana sy ny vehivavy entina hampisongadinana ny dokam-barotra: https://globalvoicesonline.org/2008/05/11/cambodia-advertisement-that-attracts/
 fialan-tsiny avy amin'ny BBC: https://globalvoicesonline.org/2008/10/06/philippines-racist-bbc-show/
 vodin'ilay marary: https://globalvoicesonline.org/2008/04/18/philippines-medical-scandal/
 filazana ny fihenam-bidim-bodiondry : https://globalvoicesonline.org/2008/11/20/vietnamsingapore-bridal-service-controversy/
 taratasim-pisoratam-panambadian'ireo olom-pireneny amin'ny vahiny: https://globalvoicesonline.org/2008/04/04/cambodia-ban-on-foreign-marriages/
 ekena fa ny singa ara-panahy entiny kosa : https://globalvoicesonline.org/2008/11/25/malaysia-yoga-is-ok-for-muslims-but/
 hafatra entina manohitra ny silamo: https://www.globalvoicesonline.org/2008/04/03/fitna-angers-many-indonesians/
 betsaka loatra ny toera-pilokana: https://globalvoicesonline.org/2008/09/07/cambodia-casino-centers/
 Mibosesika ny mpivarotra an-dalambe : https://globalvoicesonline.org/2008/07/13/vietnam-street-vendors-2/
 hananganan’izy ireo trano fatorian'ny mpiasa vahiny : https://globalvoicesonline.org/2008/09/10/singapore-the-foreign-workers-moving-in-next-door/
 isamborana ireo mpanao gazety roa tao Vietnam: https://globalvoicesonline.org/2008/06/16/vietnam-detention-of-journalists-sparks-web-debate/
 nofohanan’ny fitondra-panjakana ny tatitra: https://globalvoicesonline.org/2008/07/27/cambodia-list-of-unsolved-attacks-against-journalists/
 mpitoraka blaogy teratany Malaysian: https://globalvoicesonline.org/2008/02/27/malaysia-bloggers-in-elections/
 mpanao blaogy koa ny mpanao politika Malaysian: https://globalvoicesonline.org/2008/05/01/mahathir-mohamad-of-malaysia-has-a-blog/
 tiany ny hinamanana amin'ny mpitoraka blaogy: https://globalvoicesonline.org/2008/03/26/malaysia-bloggers-as-friends/
 YouTube ny eveka Katolika tao Filipina: https://globalvoicesonline.org/2008/08/05/philippines-catholic-bishops-on-you-tube/
 antony nahafaty ny mpiasa Filipianina iray: https://globalvoicesonline.org/2008/04/27/mysterious-death-of-a-filipino-worker-in-hong-kong/
 Twitter Suu: https://globalvoicesonline.org/2008/04/10/myanmar-twitter-suu-project/
 fankasitrahana manohitra ny orinasa: https://globalvoicesonline.org/2008/08/05/malaysia-consumer-grievance-campaign-blog/
 fitorahana blaogy ao Vietnam dia fantatra fa fitaovana matanjaka ahafahana milaza hevitra: https://globalvoicesonline.org/2008/07/20/impact-of-blogging-in-vietnam/
 ankasitrahana ho mpahay raha eo amin'ny vaovaom-pirenena: https://globalvoicesonline.org/2008/11/20/cambodias-new-intellectuals/
 Filipina rehefa nampiseho ireo hetsika mahamoafadin’ilay naman: https://globalvoicesonline.org/2008/04/03/australian-blogger-now-a-celebrity-in-the-philippines/
 Sabah Bloggers Gathering 2008: https://globalvoicesonline.org/2008/08/14/sabah-bloggers-gathering-2008/
 Mindanao Bloggers Summit: https://globalvoicesonline.org/2008/10/25/philippines-2nd-mindanao-bloggers-summit/